Nijinja izay nafafiny i Brezila
2014-07-06 @ 21:13 in Spaoro
Taorian'ilay tsy fahafahan'i Neymar milalao dia toy ny misaona sahady ry zareo Breziliana, izay angamba no antony nangatahan'ny Federasiona Breziliana ny hanesorana ny sazy nampiharina tamin'i Thiago Silva hahafahany milalao ka hifanandrinany amin'i Alemaina.
Lahatsoratra iray vao nivoaka vao haingana ao amin'ny SBS "Brazil reaped what it had sown" no misy adikako ho anareo. Britanika ilay ranamana fa monina any Brezila indrindra hatramin'ny taona 1994 ary milaza fa mahafantatra tsara ny baolina fandaka Amerikana Tatsimo. Tim Vickery (jereo ao amin'ny faramparany ny rohy ivelany dia midira ao amin'ny "Tim Vickery's The World Game blog") no anaran'ny mpanoratra ary sombintsombiny nanaitra ahy ihany no misy adikako ho an'ny mpamaky. Tsara raha mamaky ny lahatsoratra nadika fa ho an'izay tsy manam-pahafahana hanao izany no hanoratako sombiny ho anareo.
Lasa fahavalo laharana voalohany eo amin'ny mpijery ilay Kolombiana Camillo Zuniga ary mangataka ny federasiona breziliana ny hanasazy azy henjana (tsy fahazoa-milalao maharitraritra). Ankehitriny moa rehefa hita etsy sy eroa (any an-toerana) ny afisin'ilay ranamana tsy afa-mihetsika dia mivoaka eny am-bavaravarakely ny zavamisy, rehefa mijery malalaka kokoa.
Somary mahavariana ihany, hoy ny gazety miresaka fanatanjahantena iray malaza any Brezila fa i Brezila no imbetsaka namely kokoa noho i Kolombia (31 sy 23), tarehimarika io fa rehefa tena jerena dia efa ao anatin'ny paikady tokoa, io no "paikam-pamelezana": Paika mba tsy hampisosasosan'ny mpifanandrina aminy ny baolina sy ny fitazonana azy ka simbaina amin'ny alalan'ny famelezana hatrany ny lalao. Mitaraina ny mpanazatra Luiz Felipe Scolari fa atao hazalambo i Neymar nefa avy amin'ny ekipany ihany no iandohan'ny hazalambo.
Raha nisy ny mpilalao nohazaina tamin'iny lalao iray iny dia i James Rodrigez avy ao Kolombia izay asian'ny mpilalao afovoan'i Brezila Fernandinho hatrany mba hanindriana azy, ary tsy manao na inona na inona ny mpitsara amin'izany fotoana izany... Tahaka ny misy torolalana avy amin'ny FIFA arahin'ny mpitsara. Mampidi-doza tena mampidi-doza eo amin'ny lalao anefa izany trangan-javatra izany rehefa samy Amerikana Tatsimo no milalao, raha nisy namely ny ekipa iray ka tsy natao na inona na inona dia hamaly koa ny anankiray ary fantatra avy hatrany hoe iza no ho lasibatra amin'izany.
Raha lazaina amin'ny fomba hafa izany dia nahazo fampitandremana i Brezila (tamin'ny nilalao tamin'i Chile) - aza mihaza mba tsy hohazaina. Tsy noraharahiany anefa izany fampitandremana izany. Niezaka izy ny namely an'i James Rodriguez tsy ho afa-milalao, ary ny vokany dia i Neymar no tafavoaka tsy hilalao ny Mondial intsony amin'ity andiany ity.
Mampalahelo ilay izy ho azy, ho an'ny ekipany ary ho an'ny fifaninanana. Fa ny mampalahelo sady marina tsy azo idifiana dia nijinja izay nafafiny i Brezila. Voatery nosoratana, hoy ny mpanoratra namarana.